Dainik Samaj | निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतरा : कानुनी रुपमा एक नेकपा ; कि फुटेर आउनुपर्यो कि मिलेर ! - Dainik Samaj निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतरा : कानुनी रुपमा एक नेकपा ; कि फुटेर आउनुपर्यो कि मिलेर ! - Dainik Samaj
निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतरा : कानुनी रुपमा एक नेकपा ; कि फुटेर आउनुपर्यो कि मिलेर !
काठमाडाैं। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने–नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेताभित्रके विवाद बन्न पुगेको छ ।
‘विवादलाई सेटल गरेर नजाँदा दल दर्ता कै समयमा झगडा हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘नेकपा कि टुटेर आउनुपर्यो वा मिल्नुपर्यो । नभए त्यसले चुनावलाई प्रभावित बनाउँछ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।